GRAPES GLOW (WADDADA JIDKA): SHARAXAADA KALA DUWAN EE SAWIRRADA, TALOOYINKA DARYEELKA, CUDURADA IYO CAYAYAANKA - BEERTA
Way adagtahay inaad ka hortagto rikoodhada xiisaha leh marka ay ku siiyaan si aad u cunaan canab si fiican u koray ee noocyada kala duwan ee Zarevo.
Miro-firfircooni ballaadhan, midab casaan iyo lilac yaab leh, dhadhan wacan oo aan macaan macaan lahayn kama tagi doono qof aan indho la'aan aheyn.
Grape Glow waa macmacaan casaan ah oo soo go'ay oo loo kobciyay isticmaalka cusub.
Magacyada suurtagalka canabkiisa: Waddada, Isboortiga-2. Noocyo casaan ah waxaa ka mid ah Angelica, Original, Gurice Pink.
Glown Glow: sharaxaad kala duwan
Geedka canabkuna waa mid awood leh, si xoogan u ballaarinaya, oo kobcinaya 2/3. Marka laga beerto chubukov waa in la ogaado in mustaqbalka mid ka mid ah laga yaabaa inuu u baahan yahay ilaa 2.5 mitir oo meel bannaan dhinac kasta oo jir ah. On hal canab ah waxaa jira saddex indhood oo darsin ah.
Midabka jilifka ee geedka canabka ah laftiisu waa ciriiri, lakabyo yaryar waa midab huruud ah oo huruud ah, midabka gooynta burushyada waa cagaar iftiin ah. Caleemuhu waa mid cagaar ah oo midab leh, shan farood, oo leh jajab dhidid ah dhinacyada iyo xididada muuqda.
Laga soo bilaabo 100% ee caleemaha la sameeyay 50-65% waxay noqdeen wax miro dhal ah.
Kooxaha ayaa hoos u dhigma, hoos u dhigma, hoos u dhiga, laakiin aan lahayn cad "baldis" sababtoo ah maqnaanshaha berry. Qeybta caadiga ah ee farqiga u bislaaday waa 700-800 g. Burushyada shakhsi ahaaneed waxay gaari karaan 2 kg oo miisaanka.
Delight, Merlot iyo Bazhena waxay ku faani karaan kooxo waaweyn.
oo leh ubaxyada laydhka oo daciif ah;
aad u sarreeya;
Beerta kala badhkeed ee qaybta sare waxay ku jirtaa hurdi-cagaaran, qaybta hoose waxay kuus kuus maraan casaan lilac ah dhamaadka;
Kooxaha si fiican u caleenta waxay ka kooban yihiin midabyo midab leh oo casaan leh oo leh shimmer lilac-brown;
Celceliska tirada ee berry 10-14 g;
xajmiga caadiga ah ee canabka waa 38.5 x 23.1 mm;
sonkorta ku jirta 15-16%;
dhibcaha dhadhanka - 8.6 dhibcood.
Isku dar saafi ah:
Lama oggola "dhadhan", laakiin waa wax fiican;
macaan aan macno lahayn;
Haddii aad xiiseyneyso canab leh dhadhan aan caadi aheyn, ka dibna fiiro gaar ah u siiya Bulgaariya, Gordey, Ruta iyo Shukulaatada.
Dhawr sawir oo canab ah "Glow":
Waxaa la aaminsan yahay in noocyada kala duwan ee canabka ee Zarevo markii ugu horeysay ee ay soo saareen ukumaha Moldova.
Labo waalid oo canab ah: Moldova x Cardinal.
Maanta, noocyada kala duwan ee beeraha ee gobollada koonfureed ee Ruushka iyo Ukraine, muddada dheer ee kulul waxay lagama maarmaan u tahay ururinta berry oo leh macaan ku filan, taas oo aan macquul aheyn gobollada leh xilliga dayrta, roobabka iyo qabowga.
Iyadoo qaadista waqtigeeda ay muujinayso wax-qabad wanaagsan iyo ilaalinta tayada.
Waxay ka duwan tahay noocyo kale oo sabiib ah:
on isku dheelitirka ee fruiting - 1-1.3;
marka la eego heerkul aad u hooseeya (caabbi barafeed): illaa - 220C;
ujeedka ah in lagu jajabiyo qulqulka qoyaanka ee ciidda;
iska-caabbinta dhexdhexaadinta kalluunka cagaarka, caarada budada ah ee been abuurka ah, mid dhexdhexaad ah si ay anthracnose ah.
Isku day inaad jajabiso iyo Dunav, Gift Zaporozhye iyo Victoria.
Waa in la xasuusto:
waqtigaa si caadi ah u soocaan xakabadaha, taas oo si wanaagsan u saameyn doonta heerka sonkorta ee miraha;
haddii ay jirto xaalad waraab ah, mid waa inuu si gaar ah u taxadaraa inta lagu jiro xilliga Bisaylkiisa ee berry - ma u dulqaadan karo qulqulka ugu yar iyo crack;
goosashadii hore ee beertu waxa ay ka muuqataa macaan ee berry (dhadhanka ayaa noqon doona dhanaan).
Xaaladaha jawiga wanaagsan ee dalagyada wanaagsan:
ma jiro roobab inta lagu jiro xilliga ubaxyada;
xagaaga kulul dhexdhexaadka ah;
qalalan iyo diirran xilliga dayrta leh maalmaha ugu fiican bisha Sebtembar iyo Oktoobar.
Hadji Murat, Husayne White iyo Montepulciano ayaa sidoo kale doorbidaya kuleylka.
Geedka geedka canabka ah ayaa lumiya xasaasiyad si loo yareeyo fungusta haddii uu ku dhoco dhirta deriska ah, dhismaha, oo wuxuu ku yaalaa goob leh hawo hoos u dhac ah.
Marka calaamadaha xudunta ay yeeshaan (dhibco yaryar oo caleemo ah iyo ubax cadaan ah oo ku yaal barta barta, laakiin dhinaca danbe, cad "bur" oo gacmaha ku leh ubax ama ugxan), codso:
saarista qaybaha waxyeellada leh iyo gubista ku xigta;
daaweynta daroogooyinka (Kuproksat, Bordeaux isku dar, chlorine copper, Antracol).
Ka hortagga iyo cudurrada caanaha sida caadiga ah sida oidiyoo, noocyo kala duwan oo kallana, anthracnose, bakteeriyo, iyo chlorosis ayaa loo baahan karaa.
Cayayaanka joogtada ah ee canabkiinna ah - caleen canab. Sallalaheeda waxay la mid tahay xayawaan isku mid ah leh burooyinkeeda ubaxa, burooyinkeeda, caleemaha yaryar iyo ugxan-yari.
Waxaa suurtagal ah in la arko weerar ah cayayaan marka waalidkoodu uu muuqdo - dhicin leh labo baalal ah oo baalal u eg, oo lagu qurxiyey jilicsanka madow, iyo kuwa danbe oo ku rinjiyeyn midabka casriga ah.
Tallaabooyinka ka hortagga iyo xagjirka ka dhanka ah diirta noocyada kala duwan:
gubashada caleemaha dhacday, jilbaha dhacay iyo jaray lakabyo;
ku buufin leh xalka Fury, Zolon, Bi-58, Talstar 12 maalmood ka dib xagaaga ee dhicin. Nidaamka waa la soo celiyaa ka dib markii isla mudadaas kadib markii daaweynta ugu horeysa.
Sida ay sheegeen bannaanka qaar ka mid ah jecel oo canab koraya, U sharax wakiilka midab-takoorka ee dhaqanka.
Iyadoo aan xakameynin xaddiga biyaha ee ay ku shaqeeyeen geedka canabka ah, dhammaan hawsha meydhinta, quudinta, gooyo baadiyaha ma bixin karto: hal roob oo wanaagsan oo wanaagsan inta lagu guda jiro foosha rucubada, maaddaama ay isla markiiba diyaar u yihiin inay u leexiyaan dharka.
Si kastaba ha noqotee, beeralayda horumarsan ee dhistay nidaamyada sifeynta biyaha wanaagsan, xitaa cimiladu ma awoodi doonto in ay faragaliso naftooda iyo kuwa ay jecel yihiin ee leh quruxda quruxda badan.
Waxaan kuugu soo bandhigi doonaa fiidiyow gaaban oo ku saabsan nooca kor ku xusan:
Gacaliye qaali ah! Ka tag faallooyinka ku saabsan noocyada kala duwan ee canab "Glow" (Roadside) ee faallooyinka hoos ku qoran.